Chickenpox (ရေကျောက် ရောဂါ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Chickenpox (ရေကျောက် ရောဂါ)
Chickenpox (ရေကျောက် ရောဂါ) ကဘာလဲ။
ရေကျောက်ဆိုသည်မှာ မျက်နှာ နှင့်ခန္ဓါပေါ်ရှိ အရေပြားနှင့် နံရံအမြှေးပါးတို့တွင် အဖုအပိန့်ထွက်၍ varicella zoster ဗိုင်းရပ်စ် ကြောင့်ဖြစ်သည့်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
ရေကျောက်ခုခံအားမရထားသူ (မပေါက်ဘူးသူ)နှင့် ရေကျောက် ကာကွယ်ဆေးမထိုးထားသူတို့တွင်ပို၍ကူးစက်နိုင်သည်။
ထိုဗိုင်းရပ်စ်သည် ကလေးများတွင် ရေကျောက်ဖြစ်စေတတ်သလိုပင် လူကြီးများတွင်လည်း ရေယုန်ဟူ၍ဖြစ်စေတတ်သေးသည်။
လူကြီးရေယုန်ဖြစ်ပါက ထိုအဖုအပိန့်များသည် အလွန်နာကျင်တတ်ကာ ဆိုးရွားသော နောက်ဆက်တွဲများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Chickenpox (ရေကျောက် ရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ရေကျောက်သည် အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားမရွေး ကူးစက်နိုင်သောရောဂါဖြစ်ကာ ၁၅ နှစ်အောက် အရွယ်များတွင် ပို၍ဖြစ်တတ်သည်။ ကလေးများ ၊ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ ၊သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင်လည်း အဖြစ်များတတ်သည်။
ထိုကြောင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းဖြင့် ရေကျောက်ရောဂါ ကူးစက်မှုကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်သလို၊ ရေကျောက်ရောဂါ၏ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများကိုပါကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်သည်။
Chickenpox (ရေကျောက် ရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ရေကျောက်ဗိုင်းရပ်စ်သည်ကူးစက်ခံရပြီး ၇ ရက်မှ ၂၁ ရက်အတွင်း ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။ ရောဂါလက္ခဏာများမှာ ကိုယ်ပူခြင်း၊ နှာရည်ယိုခြင်း၊ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း ၊နုံးခြင်း၊ခံတွင်းပျက်ခြင်း၊ ခန္ဓါကိုယ် အနီစက်ထွက်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။
အရေပြားရှိအနီစက်များသည် ၂ရက် ၃ရက်ကြာပြီးနောက် ယားယံအနီကွက်ဖြစ်လာကာ ထိုမှတဆင့် အရည်ကြည်ဖုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ ရောဂါလက္ခဏာပေါ်မူတည်၍ အရည်ကြည်ဖု အနည်းအများကွာခြားနိုင်ပြီး အချို့လူများတွင်မျက်စိ၊နား၊ပါးစပ်တို့တွင် အနာများဖြစ်တတ်ကြသည်။
ထိုအရည်ကြည်ဖုများသည် ၄ရက် ၅ ရက်အတွင်း ခြောက်လာကာ နောက်ဆုံးအနာဖေးများ အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ ရေကျောက်ရောဂါသည် အနီစက်ပေါ်ပြီး ၁ရက် ၂ရက် နှင့် အရည်ကြည်ဖုပေါ်ပြီး ၆ ရက်အထိ တခြားသူများသို့ ကူးစက်နိုင်သည်။
ရောဂါလက္ခဏာအပြောင်းအလဲရှိနိုင်သောကြောင့် ရေကျောက်ပေါက်သည်ဟု သံသယရှိပါက နီးစပ်ရာ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ကုသသင့်သည်။
အောက်ပါလက္ခဏာများ ဖြစ်ပေါ်လာပါက ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ကုသ သင့်သည်။
• ခေါင်းမူးခြင်း၊ရင်တုန်ခြင်း၊အသက်ရူကျပ်ခြင်း၊ခြေလက်များတုန်ရီခြင်း၊ မူးမေ့ခြင်း၊ချောင်းတအားဆိုးခြင်း၊အန်ခြင်း၊ဇက် ကြောတက်ခြင်း၊အဖျားကြီးခြင်း။
• ခြောက်လအောက်ကလေးများနှင့်ကိုယ်ခံအား နည်းသူများတွင်ဖြစ်ခြင်း။
Chickenpox (ရေကျောက် ရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ရေကျောက်သည် varicella zoster ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်ပြီး တစ်ဦးမှတစ်ဦးသို့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း မှတဆင့် သော်လည်းကောင်း အရေပြားခြင်း ထိတွေ့၍သော်လည်းကောင်း ကူးစက်နိုင်သည်။
Chickenpox (ရေကျောက် ရောဂါ) ဖြစ်နိုင်ခြေကို ဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ရေကျောက်ဖြစ်ပွားနိုင်ချေ မြင့်မားစေသော အကြောင်းအရာများမှာ
Chickenpox (ရေကျောက် ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ရေကျောက်သည် တခြားအရေပြားရောဂါများနှင့် ကွာခြားသည်။ ထို့ကြောင့်ရေကျောက်ပေါက်ပါက သိသာသည်။ နီးစပ်ရာဆရာဝန်နှင့်ပြသရုံဖြင့်ပင် ရေကျောက်ကိုသိရှိနိုင်သည်။
Chickenpox (ရေကျောက် ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ပင်ကိုကျန်းမာရေးကောင်းသောကလေးများတွင် ဗိုင်းရပ်စ်သတ်ဆေး သောက်ရန်မလိုပါ။ အဖျားကြီးပါကပါရာစီတမော့ကဲ့သို့ဆေးဝါးပေးနိုင်သည်။ သို့သော်အက်စပရင်ပါသောအကိုက်ခဲပျောက်ဆေးများမပေးသင့်ပါ။ လိုအပ်ပါကယားယံခြင်းသက်သာစေရန်သောက်ဆေးများ၊ လိမ်းဆေးများ ၊အုပ်ဂျူံ ကွေကာအုပ်တို့ ဖြင့် ရေချိုးခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။
ရေကျောက်ပေါက်ပါကအရည်များများသောက်ခြင်း၊ အနားယူခြင်းများလိုအပ်သည်။ တခြားအိမ်သားများသို့ရေကျောက်ရောဂါမကူးစက်စေရန် အရည်ကြည်ဖုများ သက်သာသည်အထိ သီးခြားခွဲနေစေရန် လိုအပ်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပျောက်ဆေးဝါးများကို ရောဂါအခြေနေ ဆိုးဝါးနိုင်သူ၊ ခုခံအားကျဆင်းနေသူ (ဥပမာကင်ဆာရောဂါသည်များ၊ ရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုးကုသခံထားသူများ)တွင်သာ အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက ရေကျောက် ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် ရေကျောက်ကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
• လက်ကိုအချိန်မှန်သေချာစွာဆေးရမည်။ အိပ်ယာခင်းများဝတ်ထားသောအဝတ်များကိုရေနွေး၊ ဆပ်ပြာများဖြင့်လျှော်ရမည်။
• လက်သည်းညှပ်ခြင်းဖြင့် အရည်ကြည်ဖုများ ကုပ်မိခြင်း မှကာကွယ်နိုင်ပြီး ပိုးမဝင်အောင်တားဆီးနိုင်သည်။
• အက်စပရင်ပါသော ဆေးဝါးများမသုံးသင့်ပါ။
• ရေကျောက်ပေါက်သောကလေး၏ ကျောင်းကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနှင့်အခြားကလေး များ၏မိသားစုဝင်များကိုပါ အကြောင်းကြားထားသင့်သည်။
• ယားယံခြင်းသက်သာစေရန်ဆေးတိုက်ခြင်း၊ ရေပတ်တိုက်ခြင်းများပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်။
• အဖျားကြီးခြင်း၊နုံးလာခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အလင်းကြည့်လျှင်မျက်လုံးစူးခြင်း၊အန်ခြင်း၊ဂနာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း၊မူးမေ့ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်လျှင်နီးစပ်ရာ ဆရာဝန်နှင့်ချက်ခြင်း ကုသသင့်သည်။
• ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးများကို ရေကျောက်မပေါက်ဖူးသူများအား ထိုးထားပေးသင့်သည်။
ရေကျောက်နှင့် ပတ်သတ်သည့် အခြားအချက်အလက်များ ထပ်မံသိရှိလိုပါက သင်၏ ဆရာဝန်နှင့် တိုငိပင်ဆွေးနွေးရန် လိုအပ်သည်။
Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor. Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier,2012. Print edition. Page 81.
home health handbook. Whitehouse Station, NJ, Merck Research Laboratories. Page 1772.
Chickenpox. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/chickenpox/basics/definition/con-20019025. Accessed Jul 13 2016.